Nahita fomba hanamboarana ny sakafo hatsiro kanefa tsy matavy loatra ny matihanina dia ny fampidirana ny yaourt tsy mamy ao anatin’ny sakafo atao solon’ny fraomazy na ny « crème » mampatsiro azy. Ireto misy karazan-tsakafo efatra azo hohanina ao anaty régime fampihenan-tena. Samy ampiasana “yaourt” tsy mamy avokoa izy ireo ka manasa anao hanandrana azy ireo :
Lasopy kaokaombra amin’ny yaourt
Esorina ny voan’ny kaokaombra voavaofy dia totoina miaraka amin’ny tongolo gasy, tongolo maitso, ranom-boasarimakirana ary ronono kely amin’ny « mixeur ». Afangaro aminy avy eo ny yaourt tsy mamy sady tsy matavy. Asiana sira kely dia kely. Hohanina mangatsiatsiaka.
Sandwich amin’ny “crudités” saosy yaourt
Raha te-hihena dia tsara raha ianao ihany no mikarakara ny sakafonao. Ity misy karazana saosy ampiarahana ny “crudités”. Yaourt 1 no afangaro amin’ny persily sy tongolo maitso voatetika. Tondrahana ranom-boasarimakirana. Ahosotra io saosy io ny mofo feno na « pain complet » dia asiana didina trondro na jambon ao anatiny. Asiana ravina salady sy didina voatabia koa. Raha mahavita dia mety koa ny karaoty voakiky. Io mofo io no atao sakafo atoandro ohatra. Hohanina miadana, tsakoina tsara mba hahatsiaro ho voky.
Tarte amin’ny asperge sy yaourt
Na dia manao régime aza dia tsy fady akory ny mihinana lafarina tsindraindray. Ity « tarte » ity izao azon’ny olona mampihena tena hohanina na dia tsy tokony hihinana azy matetika be kosa aza. Andrahoina amin’ny rano kely ny asperges efa vaodio. Alahatra eo ambony “pâte brisée ». Afangaro ny yaourt tsy mamy 2, ny atody 3 ary ny fraomazy 80grama dia tondrahana. Tondrahana divay fotsy 5 santilitatra. Alefa eo ambonin’ny asperge io fangaro io. Ampidirina ao anaty lafaoro 180° mandritra ny 35 minitra. Hanina matimaty miaraka amin’ny salady. Azo ovaina hafa ny legioma.
Ny milk shake
Manala hetaheta kanefa mahavoky ny milk shake. Totoina miaraka amin’ny voankazo izay tiana ny yaourt tsy mamy iray dia tapohina ronono kely sy ranom-boasarimakirana ary ampiana vaingana lagilasy vitsivitsy. Azo atao sakafo maraina tsara izy ity.